March 2022 – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on किन बाथरूममा सबैभन्दा बढि हर्टअट्याक हुने गर्छ, यस्ताे छ कारण ….
No Comments on पेट्रोलको मूल्य १८३ र ग्यास साढे २२ सय बनाउन आयल निगमको प्रस्ताव
काठमाडौ ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० बुादे प्रस्ताव पठाउादै निगमले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा थप्न सुझाव दिएको हो । बिदाका दिन सवारीसाधनको प्रयोग कम हुने भएकाले तेलको खपत पनि कम हुने निगमको भनाई छ ।
फेरी नेपालमा यु’द्ध सुरु
No Comments on फेरी नेपालमा यु’द्ध सुरु
काठमाडौं :सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–२ को जागृतिटोलमा ब म ल्याउने मान्छेबाट वि’स्फो’ट भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
गएराति सुतली ब म वि’स्फो’ट भएको थियो । दुई जना घाइते भएका छन् । वि’स्फो’ट घटना लगत्तै खटिएको प्रहरी टोलीले अनुसन्धानको क्रममा योजनाबद्ध ढंगले पहिले नै ल्याइ ब म राखेर वि’स्फो’ट नगराएको पाइएको हो ।
प्रदेश १ का प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) अरुणकुमार बिसीेले भने, ‘ब म राखेको भन्दा पनि लिएर आउने मान्छेबाट वि’स्फो’ट भएको देखिन्छ ।’
वि’स्फो’टबाट २२ वर्षीय रवीन थापा र लम्जुङका २३ वर्षीय शेरजंग गुरुङ घाइते भएका छन् प्रहरीले उनीहरूलाई पनि निगरानीमा राखेको छ ।
डीआईजी बिसीले वि’स्फो’टको घटनापछि प्रदेश मातहतका सबै प्रहरी युनिटलाई सतर्क रहन निर्देशन दिएका छन् ।
‘रातिको घटनाले हिमाल सुरक्षा परिषद्को गतिविधि बढ्यो भन्न त सकिँदैन । किनभने अन्य स्थानमा देखिएको छैन’, डीआईजी बिसीले भने, ‘तर, बढी निगरानी राख्ने र प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका प्रहरी युनिटहरूलाई सतर्क रहन निर्देशन दिएका छौँ ।’
गत १५ फागुनमा परिषद्ले पर्चामार्फत सशस्त्र यु ‘द्धको घोषणा गरेको थियो । हिन्दु राष्ट्र घोषणा, राजतन्त्र स्थापना, संघीयता खारेजलगायत मुद्दा उठाउँदै यु’ द्धको घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरेको ठीक एक महिनामा वि’स्फो’टको घटना भएको हो ।
१५ वर्षीया किशोरीलाई गाउँबाट काठमाडौंमा ल्याएर लिभिङ टुगेदर बसालेका धादिङेली युवकले…..
No Comments on १५ वर्षीया किशोरीलाई गाउँबाट काठमाडौंमा ल्याएर लिभिङ टुगेदर बसालेका धादिङेली युवकले…..
धादिङ।किशोरीलाई ज’बर’जस्ती कर’णी ग’रेको आरोपमा भक्तपुरबाट धादिङका एकजना युवक पक्राउ परेका छन् ।
१५ वर्षीया किशोरीलाई ब’ला’त्कार ग’रेको आरोपमा भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका–६ स्थित डेकोचाबाट शनिबार राति धादिङको ज्वा लामुखी गाउँपालिका-४ मैदी घर भएका २२ वर्षीय राज परियार पक्राउ परेका हुन्।
किशोरी र राजु गाउँबाट काठमाडौंमा आएर लिभिङ टुगेदर बस्न थालेका भक्तपुर परिसरका डिएसपी राजु पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उमेर नपुगेका कारण विवाह गर्नेबारे असमझदारी भएपछि किशोरीका परिवारले उनीविरुद्ध ब’ला’त्कारको उजुरी दिए अनुसार परियारलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएको नरैनापुर इलाका प्रशासन कार्यालय पुनःस्थापना हुने भएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले पुनःस्थापनाका लागि तयारी सुरु भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित पालिकालाई पत्राचार भएको जानकारी दिनुभयो । यसको स्थापनासँगै स्थानीयवासीलाई जिल्ला सदरमुकाम नेपालगञ्ज आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुर अहिले नेपालगञ्जस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । नागरिकता, प्रशासनिकलगायत सेवा लिन स्थानीयवासी करिब ४५ किलोमिटरभन्दा बढी दूरी पार गरेर नेपालगञ्ज आउने गर्छन् ।
प्रजिअ खत्रीले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाले पाँचकोठे भवनको व्यवस्था गर्नेबित्तिकै कार्यालय स्थानान्तरण हुने छ ।” गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतले जिल्ला प्रशासन बाँकेको पत्र प्राप्त भएपछि आफूहरू भवनको खोजीमा लागेको जानकारी दिनुभयो ।
इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुरमा पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै नरैनापुरवासीले पाँच हजार हस्ताक्षर प्रजिअ खत्रीलाई बुझाएका थिए । नरैनापुर गाउँपालिका–४ मा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालय विसं २०७२ मा असुरक्षाको कारण देखाई नेपालगञ्जमा विस्थापित भएको थियो ।
नुवाकोटबाट डरलाग्दा युवक पक्राउ ! आफ्नै आमालाई…..
No Comments on नुवाकोटबाट डरलाग्दा युवक पक्राउ ! आफ्नै आमालाई…..
नुवाकोट- : झमक्क रात परिसकेको थियो । चरिमाया बलामी घर आइनन् । करिब दुई किलोमिटर दूरीमा रहेको गोठमा गएकी थिइन् । अरुबेला छिट्टै आउँथिइन् । तर, २८ फागुनमा आइनन् । उनको घर नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका –१, नयाँवस्ती हो ।
पर्खिँदा पनि आमा नआएपछि श्रीराम बलामी आत्तिए । उनी चरिमायाका छोरा हुन् । चरिमायाका कान्छा छोरा चाहिँ भीमबहादुर बलामी हुन् । उनी पनि घरमा देखिएनन् । रात छिप्पिँदै गयो । न घरमा आमा आउँछिन् न भीमबहादुर नै ।
अघिल्लो दिन २७ फागुनमा भीमबहादुरसँग श्रीरामको झगडा पनि परेको थियो । कुटाकुट हुँदा भीमबहादुरको अनुहारमा चोट लागेको थियो । २८ गते बिहानैदेखि उनी घरमा थिइन् । तर, साँझ गोठ गएकी आमा नआएपछि श्रीरामले प्रशान्त बलामीकहाँ पुगे र भने ‘यति राति भइसक्यो । आमा आउनुभएन र खोज्न जाऔँ ।’
कतै लडिइन् कि भनेर उनीहरू सिधै गोठतिर खोज्न गए । गोठ सिमेन्ट र इँटाले बनेको दुई तले छ । माथिल्लो तलामा एउटा खाट छ । श्रीराम र प्रशान्तले त्यही खाटमा सुतिरहेका देखे–भीमबहादुरलाई । जो श्रीरामसँगै अघिल्लो रात झगडापछि घरमा थिएनन् । र, श्रीरामले सोधे, ‘आमा देख्यो ?’
भीमबहादुरले जवाफ दिए, ‘मलाई थाहा छैन । मलाई मेरो घरको कोही पनि चाहिँदैन ।’ भीमबहादुरको जवाफले श्रीरामको मनमा चिसो पस्यो । झरे गोठको तल्लो तलामा । त्यहाँ अस्वाभाविक घाँस, पराल र पत्करको थुप्रो देखे । राम्ररी हेर्दा त खुट्टा पो देखे । पत्कर पन्छाएर हेर्दा आमा चरिमाया देखिइन्, मृत अवस्थामा । श्रीरामका अनुसार त्यसबेला आमाको टाउको, नाक र कानदेखि रगत बगिरहेको थियो ।
लगत्तै प्रहरी चौकी ओखरपौवा र प्रहरी चौकी ककनीमा खबर गरे । दुवै प्रहरी चौकीबाट प्रहरी टोली घटनास्थल आइपुगे । र, भीमबहादुरलाई नियन्त्रणमा लिए । शवको प्रकृति मुचुल्का तयार गरे । परीक्षण गर्न शव सदरमुकाम विदुर ल्याए । परीक्षण प्रतिवेदनले टाउकोमा गम्भीर चोट पर्दा मृत्यु हुन पुगेको उल्लेख गर्‍यो ।
अर्कोतिर, भीमबहादुरले घटनाको संलग्नता स्वीकारेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय नुवाकोटले प्रहरीले अनुसन्धानपछि तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार आइतबार जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अभियोजन गरेको छ । वकिल कार्यालयले तयार गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेखित भीमबहादुरको बयानअनुसार २८ फागुनको राति ८÷९ बजेतिर आमा चरिमाया गोठमा गाई-भैंसीलाई घाँस काट्न आएको देखे ।
आमालाई भने, ‘मलाई भोक लाग्यो । २/३ दिन भइसक्यो खाना नखा’को । भीमबहादुर खाली झगडा गर्ने र कहिलेकाहीँ पैसा माग्दा नदिए कुटपिट पनि गर्ने हुनाले आमा चरिमायाले भनिन्, ‘खान मन लागे पकाएर खा, मन नलागे नखा, तँ मेरो घरमा बस्नुपर्दैन । घरबाट निस्केर जा ।’
यसपछि सम्झाइबुझाइ गर्दा झन गाली गरेको र झापड पनि हानेकीले कोदालो टिपेर टाउको र अनुहारमा हानेर आमा चरिमायालाई हत्या गरेको बयान भीमबहादुरको छ । प्रहरीका अनुसार अनुसन्धानको क्रममा भीमबहादुर जहिल्यै मातेर आमा चरिमायालाई पैसा माग्ने गरेको खुलेको छ ।
ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य किलोमै १०० रुपैयाँ बढ्यो, कति पुग्यो ?
No Comments on ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य किलोमै १०० रुपैयाँ बढ्यो, कति पुग्यो ?
महिलाले पुरुस को बि’र्या खाँदा हुन्छ। यस्तो फाईदा।
No Comments on महिलाले पुरुस को बि’र्या खाँदा हुन्छ। यस्तो फाईदा।
￼स्वभाव : कुनै पनि सम्बन्धको शुरुवात बाहिरी सुन्दरताबाट हेरिन्छ तर सम्बन्ध लम्बिँदै जाँदा मानिसको स्वभाव हेरिन्छ । खासमा सम्बन्धको आयु सुन्दरताले होइन स्वभावले निर्धारण गर्छ । एक महिलाले पुरुषबाट सबैभन्दा बढी अपेक्षा गर्ने भनेको राम्रो स्वभाव हो । लामो स म्बन्धमा महिलालाई सुन्दरताले भन्दा पुरुषको स्वभावले आक र्षित गर्छ ।ह्युमर : यदि महिललाई हसाउँने क्षमता छ भने तपाइँ पनि सफल पुरुष हो । किन भने महिलाहरुले आफूसँग संगत भएको पुरुषमा सेन्स अफ ह्युमर चाहन्छन् । यस्ता पुरुषले महिलामा प्रभाव छोड्न सक्छन् ।￼बनौट : शरीरको बनौट पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । कुनै पनि पुरुषको शारीरक बनौटसँग महिलाको चासो हुन्छ । एक रिपोर्टका अनुसार महिला अधिकाँश महिलालाई अत्याधिक अग्ला वा होंचा भन्दा औषत उचाइ भएका पुरुष मन पर्छन् ।
No Comments on अनुहारमा किन आउँछ कनिका जस्तो सेतो, पहेंलो रङको दाना ? यसरी पाउनुहोस् छुटकारा
No Comments on मिन्स (महिनावा,री) भएको बेला शारी,रिक सम्पर्क गर्न हुन्छकि हुदैन ?
दुई वर्षमा आमिर खानको जिवनमा भयो यस्तो घटना, अब बलिउड छोड्न चाहन्छन् उनी
No Comments on दुई वर्षमा आमिर खानको जिवनमा भयो यस्तो घटना, अब बलिउड छोड्न चाहन्छन् उनी
एजेन्सी । मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान बलिउडका एक यस्तो स्टार हुन्, जसको चमकले धेरै वर्षदेखि फिल्म उद्योगलाई उज्यालो बनाएको छ। तर यदि यो चम्किलो तारा कतै हराएको भए बलिउडमा कति कालो छाया हुन्थ्यो होला, फ्यानलाई कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ । के तपाईलाई थाहा छ बलिउडका यी स्टार अभिनयलाई अलविदा भन्न लागेका थिए । यो थाहा पाउँदा तपाई पनि छक्क हुनुहुन्छ ? तर सत्य यो हो कि आमिर खान बलिउडलाई अलविदा भन्न चाहन्थे र यो कुरा उनले आफैंले खुलाएका छन् ।
जसका कारण आमिर खान फिल्मलाई अलविदा भन्न चाहन्थे
सुपरस्टार आमिर खानले पछिल्लो दुई वर्षमा केही पलहरु आएका छन्, जब उनले फिल्मी संसारलाई अलविदा गर्ने सोच बनाएका छन्, किनकि यसले उनको व्यक्तिगत जीवनलाई असर गरिरहेको छ ।
एक अन्तर्वार्तामा आमिर खानले यसबारे खुलासा गर्दै भने कि उनले बलिउड छोड्ने सोचेका थिए, किनभने आफू सेलफिस हुँ र आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा आफ्नो काम र आफ्नो परिवारलाई दिन नसक्ने ठानेका थिए, विशेष गरी उनीहरूलाई। बच्चाहरु।
आमिरले भने, ‘जब म हिरो बनेको थिएँ, मेरो परिवार सधैं मेरो साथमा छ भन्ने सोचेको थिएँ र मैले उनीहरुलाई हल्का रुपमा लिन थालेँ । त्यसपछि दर्शकको मन जित्ने यात्रामा निस्किएँ । सुरु गर्दा धेरै मिहिनेत गर्छु, तर म ३०, ३५ वर्षदेखि यसरी काम गरिरहेको थिएँ।
आमिरले थप भने, ‘म सेल्फिस बनेको थिएँ । म आफ्नै बारेमा सोचिरहेको थिएँ। म मेरो बच्चाहरु संग थिए, तर यो हुनु पर्छ जस्तो थिएन। अहिले म यो गरिरहेको छु। मैले अहिले ५६, ५७ वर्षको उमेरमा बुझेको छु। मलाई अचम्म लाग्छ कि यदि मैले ८६ वर्षको उमेरमा यो महसुस गरेको भए के हुन्थ्यो, कम्तिमा अहिलेको लागि म सुधार गर्न सक्छु। मलाई थाहा छैन मेरा बच्चाहरू के चाहन्छन्, त्यसैले यो ठूलो समस्या हो।
यसका लागि आमिर खानले सिनेमालाई दोष दिएका छन्
आमिर खानले भने, ‘मलाई लाग्छ कि यसले (सिनेमा) मलाई मेरो परिवारबाट टाढा लगेको छ । मैले अभिनय छाड्छु, निर्माण मात्र गर्छु भनेर परिवारलाई भनेँ । मैले उनीहरूलाई भनेको थिएँ कि म तिमीसँग मात्र रहन चाहन्छु। यो सुनेर मेरो परिवार छक्क पर्यो ।
आमिरले तीन महिनापछि आफ्ना छोराछोरीले जीवनमा सन्तुलन कायम गर्न सल्लाह दिएको बताए । अभिनेताले भने( मेरा छोराछोरी र किरणले मलाई गल्ती गरिरहेको बताए । किरण भावुक भई मभित्र फिल्म बसेको बताइन् । त्यसैले दुई वर्षमा धेरै भयो, उद्योग छोडेर फर्किएँ । आमिरले पछिल्लो दुई वर्ष सबैका लागि निकै कठिन रहेको बताए ।
आफ्नो कुरा पूरा गर्दै आमिरले थप भने– म आज ५७ वर्षको भएँ । यो संसार (सिनेमा) ले मलाई धेरै आकर्षित गरेको छ र म यसमा यति भावुक भएँ कि मैले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएँ । म आफ्नो जीवन जिउदै थिए । उनी सपनाको पछि दौडिरहेका थिए । प्रियजनसँग समय बिताउन सकिन । आमिर खानले पनि म दि रा त्यागेको जानकारी दिएका छन् ।
वर्कफ्रन्टको कुरा गर्ने हो भने आमिर खान चाँडै फिल्म लाल सिंह चड्डामा देखिनेछन् । आफ्नो बहुप्रतिक्षित चलचित्रको बारेमा कुरा गर्दै उनले अहिले चलचित्रलाई फाइनल टच दिन व्यस्त रहेको बताए । आमिरको फिल्म लाल सिंह चड्ढा अगस्ट ११ मा सिनेमाघरमा रिलिज हुँदैछ । यो फिल्मले दर्शकको प्रतिक्रिया कस्तो पाउँछ त्यो हेर्ने हो ।